Iphrofayili Yenkampani - Sichuan Zili Machinery Co., Ltd
I-Sichuan Zili Machinery Co., Ltd.
Amathuluzi omshini we-CNC
I-automatic powder spraying workshop
Manje imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kokusanhlamvu, ukudla, ukudla kwezilwane, izimboni zemithi kanye namakhemikhali amasistimu wokudlulisa umoya womoya.
Siwine impendulo enhle evela kumakhasimende emhlabeni jikelele ngenxa yokuthi isakhiwo esihlangene semikhiqizo yethu ukwehluleka okuphansi nokusebenza okulula.
Njengamanje, senze uhlelo lwethu olusha lweminyaka emihlanu, olusekelwe ekuqhubekeni nokuthuthukisa kanye nokwenza ama-valve e-TGF ajikelezayo kanye nama-valve e-TXF ahlukene kabili, sithembele emikhiqizweni ekhona, ukuhlinzeka amakhasimende ngezinhlobonhlobo zokudla, impushana, i-particle. udaba kanye nosimende pneumatic edlulisela izixazululo zobunjiniyela kumakhasimende.
Mayelana neqembu lethu, njengoba sesikumkhakha we-rotary airlock kanye ne-2 way diverter valve industry cishe iminyaka engu-20. Inkampani yethu inohlelo lokuthuthukisa ubuchwepheshe obuvuthiwe kanye nethimba. Njengamanje, imikhiqizo ye-rotary airlock valve ibuyekezwe ochungechungeni lwesizukulwane sesishiyagalombili. Umkhiqizo unokunemba okuphezulu kanye nomphumela ongcono wokuvala umoya, futhi uye wanconywa amakhasimende iminyaka eminingana.
Ngaphezu kwalokho, njengoba sibambisana namakhasimende amaningi ngokwengeziwe, ithimba lethu lesevisi yangaphambi kokuthengisa nelemva kokuthengisa seliphelele kakhulu eminyakeni yamuva. Lapho amakhasimende enezidingo, singakhetha imikhiqizo efanelekile ngokwezidingo zamakhasimende.
Lapho amakhasimende ehlangabezana nezinkinga ezivamile, ithimba lethu lesevisi yangemuva kokuthengisa lizohlinzeka ngezinsizakalo zokuqondisa ku-inthanethi ngokushesha ngangokunokwenzeka, futhi lihlelele abasebenzi besevisi abaseduze ngemva kokuthengisa ukuthi bazisingathele.
i-rotary feeder, I-3-Way Diverter Valve, I-Electronic Control Valve, i-valve ye-airlock, i-valve ejikelezayo, I-3 Way Ball Valve,